iZotope RX သည် Daredevil Dialogue Editor အားဆူညံသော NYC တွင်အသံဖမ်းယူခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်ကူညီပေးသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » iZotope RX Daredevil ဆွေးနွေးပွဲ Editor ကိုဆူညံ NYC အတွက်ရိုက်ကူးပေး Audio ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားကူညီပေး
iZotope RX Daredevil ဆွေးနွေးပွဲ Editor ကိုဆူညံ NYC အတွက်ရိုက်ကူးပေး Audio ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားကူညီပေး
audio ပြုပြင်နှင့်တိုးမြှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကယ်ဆယ်ရေးကူညီပေးသည်မဟုတ်ရင်သူဟာ Emmy များအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းထဲမှာကြမ်းပြင်ကနေအသုံးမပြုနိုင်အသံစီးရီးအမည်စာရင်းတင်သွင်း
iZotope Inc ကတစ်ဦးဦးဆောင်အသံနည်းပညာကုမ္ပဏီ, ယနေ့ iZotope RX ကောင်းချီးသစ်ကို Netflix ဟာစီးရီးများအတွက်ကမ္ဘာ့ noisiest မြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်ဖမ်းမိအသံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားဖို့အသုံးပြုကြောင်းကြေညာခဲ့သည် Daredevilမကြာသေးမီကထူးချွန်အသံတည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက် 2015 သူဟာ Emmy များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည့်။
Daredevil, Matt Murdock, မန်ဟက်တန်၏ငရဲရဲ့မီးဖိုချောင်ရပ်ကွက်အတွင်းကာကွယ်ပေးသည်သူတစ်ဦးပင်မျက်စိကန်း, ရာဇဝတ်မှု-တိုက်ခိုက်နေ vigilante ၏ ALTER အတ္တဖြစ်ပါတယ်။ လူစွမ်းကောင်းအဆင့်ဆင့်မှ - သညျ့ကသူ၏ကျန်ရှိနေသောအာရုံနှင့်အထူးသဖြင့်မိမိအကြားအာရုံမြင့်နေချိန်တွင်တစ်ဦးကငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတော်တဆမှု Murdock မြင်နိုင်။
က Murdock Sonic မဟုတ်ဘဲအမြင်အာရုံထက်သူ၏လောကအနက်ဖွင့်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်သိရှိစေရန်ကူညီပေးသည်အဖြစ်အသံပြပွဲ၏အရေးပါသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ "အလွန်အစအဦး မှစ. ကျနော်တို့အသံကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားသွားခဲ့ကွောငျးကိုသိ," ခရစ်ယာန် Buenaventura, Technicolor အသံန်ဆောင်မှုများမှာသူဟာ Emmy-အနိုင်ရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအယ်ဒီတာကရှင်းပြသည်။
"ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံရဲ့မီးဖိုချောင်၏နောက်ခံ Creating, Matt Murdock, Matt အတိအကျညာဘက်အချက်များမှာ hit ကြားသောနှလုံးခုန်နှုန်းရှိခြင်း, မြို့စကားများသော၏သီအတွက်ကြားအတိအကျဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ တည်းဖြတ်နှင့်ရောစပ်ဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်စေ့စပ်ခဲ့သည်, ကြှနျုပျတို့အရာအားလုံးထွက်လှည့်ပုံကိုအလွန်ဂုဏ်ယူပါ။ "
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအယ်ဒီတာများပုံမှန်အားတည်နေရာအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါရိုက်ကူးရေးနယူးယောက်စီးတီးကဲ့သို့မူလကပင်ဆူညံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာတဲ့အခါ, သူတို့ကပုံမှန်ကို tick, ပေါ်လာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုအသံထက်အများကြီးပိုပြီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်, Buenaventura ကပြောပါတယ်။ "သူ့ရဲ့မဆုတ်မနစ်အသံဆူဆူညံညံ, ဒီတခါကြားနေရ, မြေအောက်ရထား, ရထား screeching, ကားများအနေဖြင့်မတိုးမြှင့ဂီတ, မဖော်ပြထားခြင်းနှင့်အတူကိုးသန်းအသံတွေကိုနယူးယောက်၏အသံတည်းဖြတ်ရန်ခက်ခဲတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ့်နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်။ "
သူ၏အဓိကသွားလာရင်းမှ tools များတည်နေရာပေါ်ဖမ်းမိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးချွေတာဘို့တစ်ခုမှာပါကအနည်းငယ်ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းနယူးယောက်လမ်းဘေးစင်္ကြံ၏ cacophony သို့မဟုတ်နေရာမှာင်ဖြစ်စေ, iZotope ရဲ့ RX အသံပြုပြင်နှင့်တိုးမြှင့်ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ "ဒါဟာဘဝရဲ့ချွေတာမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ RX ကိုသုံးပါ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ဘရိတ် squeals သို့မဟုတ် Beep မရှိပြဿနာကို back up ။ Lavalier မိုက်ကရိုဖုန်းကိုပိတ်ထားဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်စန်းမိုက်ထုရိုက်ပါကဖုံးလွှမ်းတယ်။ "
သို့သော် RX ရုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဆူညံသံ-ကဖယ်ရှားလိုက်ပါထက်အမှန်တကယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းကြမ်းပြင်ကနေမဟုတ်ရင်အကြီးရိုက်ကူးကယျတငျနိုငျပိုပြီးပါဘူး။ "ငါ [အ] [RX ၏အင်္ဂါရပ်] Repair ရောင်စဉ်တန်းခဲ့မဟုတ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သောပါပြီမဟုတ်ကြောင်းဖြတ်ကြပြီအများအပြားမြင်ကွင်းများရှိပါတယ်။ "
Buenaventura သည့်သရုပ်ဆောင်များကိုသူတို့ရဲ့လိုင်းများကိုအပ်သကဲ့သို့လမ်းသဘင်, drumming နှင့်နောက်ခံသီဆိုရှိရာဝါရှင်တန်ရင်ပြင်ပန်းခြံထဲတွင်တစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပစ်ခတ်အလုပ်လုပ်ပြန်ပြောပြသည်။ ယင်းအစားအဆိုပါသရုပ်ဆောင်များကို '' တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ ADR (အလိုအလျောက်ဆွေးနွေးပွဲအစားထိုး) သုံးစွဲဖို့ရှိခြင်းထက်, ခရစ်ယာန်လမ်းသဘင်ကိုဖယ်ရှားနှင့်လက်ျာသံကိုအောင်မြင်ရန် RX ရဲ့ရောင်စဉ်တန်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် "အချို့ဖန်စီတည်းဖြတ်" ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"ရောင်စဉ်တန်းပြုပြင်ခြင်းအမြဲဒီချည်နှောင်၌ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ငါသည်လွယ်ကူစွာဘရိတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကျော်ထဲကယူအဖြစ်ယူဆကြသည်မဟုတ်သူကိုပြောနေတာလူတွေကို squeals မြင်နေရတယ်။ "
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးအသုံးပြုစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါကအနာဂတ်အတွက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့" ဟုသူကမှတ်ချက်။ "RX ဒီတော့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြီးငါကငါ့အဘို့လုပ်မယ့်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏။ ငါကအလုပ်အမှုကိုပြုရဦးမည်ကိုသိသောကြောင့်ငါ RX အတွက်တိုင်းတစ်ခုတည်း plug-in ကိုအသုံးပြုပါ။ "
post ကိုထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်များ၏ iZotope ရဲ့ RX မိသားစုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.izotope.com/postproduction.
audio အသံပြုပြင် Daredevil isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော iZotope အံ့ဩခြင်း Netflix post ကိုထုတ်လုပ်မှု postproduction RX 2015-07-23
ယခင်: Vegas မှာတီဗီ Pro ကိုဂီယာရဲ့ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ Flypak ™အညွန့် PAL အဖြစ်အပျက်
နောက်တစ်ခု: FUJINON 4K က Ultra HD စီးရီး Now ကိုပို့ပြီးခံရ